Iran: Bilaogera manoratra boky momba ny fiantraikan’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2018 4:16 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, Español, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Mey 2008)
Cyrus Farivar dia bilaogera, mpanao gazety sady mpanoratra monina ao Etazonia. Manoratra boky momba ny fiantraikan'ny aterineto eo amin'ny fiarahamonina izy ankehitriny. Manoratra momba ny fiantraikan'ny aterineto ao Iran, Senegaly, Korea Atsimo ary i Shipra. Tany Iran izy vao haingana ary naka sary maromaro ahitana ireo karipetra, sakafo, tranobe sy ny zava-boary ao Iran ihany koa.
F: Nitsidika an'i Iran vao haingana ianao. Hafa tanteraka ve ny kolontsainy? Nisy fahasamihafana tamin'izay nalainao ary an-tsaina ve, ary inona no tena fantatrao tokoa momba an'i Iran?
V: Tsy nanampoka ara-kolontsaina velively i Iran. Tena nahafinaritra mihoatra noho izay noeritreretiko, ara-kolontsaina izy. Lehibe tao anaty fianakaviana Iraniana amin'ny ampahany tany Kalifornia aho, na izany aza. Tia mandray vahiny tanteraka ny Iraniana ary te-hanampy sy handray ireo fianakaviana tahaka ahy izay mbola tsy tany Iran mihitsy.
F: Manoratra boky momba ny aterineto sy ny fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina ianao. Momba an'i Iran ny iray ampahaefatry ny bokinao. Azonao azavaina ve ity tetikasa ity?
V: Manoratra boky momba ny tantara sy ny fiantraikan'ny aterineto ao amin'ny firenena efatra manerana izao tontolo izao aho, anisan'izany i Estonia, Iran, Senegaly ary Korea Atsimo. Manadihady ny fifandraisan'ny tantara ara-politika sy ara-toekarenan'ireo firenena ireo tamin'ny fahatongavan'ny aterineto tao amin'ny firenen'izy ireo ny boky. Mitondra ny lohateny hoe “The Internet of Elsewhere” (Ny aterineton'ny any an-kafa) ny boky ary havoakan'ny Rutgers University Press (USA) amin'ny faramparan'ny taona 2009.
F: Nahoana ianao no nifidy ireo firenena efatra ireo tamin'ny bokinao?
V: Nisafidy ireo firenena ireo aho satria samy manana ny fiainany ry zareo raha resaka aterineto.
Senegaly, satria firenena Afrikana ao atsimon'i Sahara izy, na dia manana fahamarinan-toerana ara-politika sy ara-toekarena aza ireo hafa maro ao amin'ny faritra. Tokony ho mora kokoa ny fidirany amin'ny aterineto bebe kokoa, saingy mbola tsy izany no izy.
Estonia, noho ny fiovana haingana izay nandalovany hatramin'ny nipoirany avy ao amin'ny Firaisana Sovietika tamin'ny taona 1991. Zara raha nisy fifandraisana tamin'ny tany ivelany izy tamin'ny taona 1991 ary efa manana finday maro kokoa noho ny isany ny olom-pirenena ankehitriny .
Korea Atsimo, satria manana ny taham-pidirana aterineto lehibe indrindra manerantany izy ary manana tosaka aterineto avo indrindra sy mora indrindra manerantany. Ahoana no nahatonga izany?
Iran, noho ny antony manokana, saingy koa satria mahaliana ny mahita ny aterineto, teknolojia manelingelina, mampifanena ireo mpandinika teokrasia sy ny demokrasia vao teraka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21.
F: Nahita zavatra iombonan'ireo firenena ireo ve ianao?
V: Nahita singa iraisan'ny besinimaro aho fa nisy fiantraikany be teo amin'ny tantara ankehitriny isaky ny firenena ny aterineto. Na dia any amin'ny firenena toa an'i Senegaly aza, mora ny aterineto ka na ny ankizy mahantra indrindra ao Dakar aza dia afaka manangom-bola eo amin'ny ankizy telo na efatra mba hizara ny fidirana amin'ny solosaina iray ao amin'ny “cybercafe” mandritra ny adiny iray tsy tapaka. Toa ho samy hafa ireo firenena ireo raha tsy misy ny fampiroboroboana ny aterineto.
F: Mieritreritra ve ianao fa misy fiantraikany tokoa eo amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fiarahamonina Iraniana ny bilaogy?
V: Mihevitra aho fa misy fiantraikany ao Iran ny bilaogy, saingy manontany tena ny amin'ny haben'ny fiantraikany mety misy ankehitriny aho noho ny fanivanana bilaogy marobe, ary nampihisarana ny tosaka haingana. Azo antoka fa maro ny Iraniana mahafantatra ny fomba fampiasana proxies sy ireo fitaovana hafa hialàna amin'ireo sakana, saingy ny zava-misy tsy maintsy handaozan'ny tanora Iraniana mpandinika sy mpanoratra marobe ny firenena hatramin'ny taona 2001 no mahatonga ahy manontany tena hoe iza no mpandresy sy resy amin'izany tranga izany. Tsy miharihary ny valiny.
F: Nihaona tamin'ireo bilaogera tany Iran ve ianao? Inona no fanamby atrehin'ireo mpikatroka an'aterineto any?
V: Tsy nahita bilaogera tany Iran aho, fa nihaona tamin'i Shahram Sharif avy ao amin'ny ITIran.com sy Sina Tabesh ao amin'ny Wikipedia Persiana. Niresaka tamin'ireo bilaogera tamin'ny alàlan'ny finday sy tamin'ny IM aho teo aloha, saingy indrisy fa tsy nahita ny ankamaroan'izy ireo. Sarotra ho an'ireo mpikatroka aterineto, na ireo izay monina ivelan'i Iran aza, no maneho hevitra manohitra ny governemanta ka mahatsiaro ho voaro amin'izay lazainy, sy ny fomba ilazany azy.
F: Ahoana ny fomba niainanao manokana ny fampiasana aterineto tao Iran? Haingana, voasivana …?
V: Nipetraka niaraka tamin'ny renibeko aho, izay, na dia nonina tany Avaratr'i Teheran aza, dia tsy nanana fahafahana niditra aterineto tao an-tranony. Nandritra ny tapa-bolana naha tao ahy, indray mandeha ihany aho no nampiasa aterineto, tany amin'ny cybercafe ao amin'ny Hotely Aseman ao Esfahan. Afaka nanao antso Skype tany Etazonia tsy nisy olana aho. Izany hoe, niditra aterineto tamin'ny iPhoneko tamin'ny endrika TENA voafetra aho – mahagaga anefa, fa ny hany tranonkala naha-tafiditra ahy tampoka dia ny New York Times.